အားကစားရုံနှင့်ကြံ့ခိုင်ရေးအတွက် QR ကုဒ်များ - လူတိုင်းသုံးပြီးလှည့်ကွက်များ
အရောင်းနှင့်စျေးကွက်မြှင့်တင်ရန်အားကစားရုံနှင့်ကြံ့ခိုင်ရေးစတူဒီယိုများအတွက် QR ကုဒ်များအသုံးပြုခြင်း
gyms အားကစားခန်းမနှင့်ကြံ့ခိုင်ရေးအတွက် QR Code မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုလေ့လာပါ။
Q QR ကုဒ်များအသုံးပြုခြင်းသည်ဖောက်သည်များအားအသိပေးနိုင်ပြီးကုန်ပစ္စည်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုတိုးမြှင့်နိုင်သည်။
အားကစားရုံ QR ကုဒ်များဖန်တီးပါ
သင်သည်သင်၏areaရိယာ၌အားကစားရုံတစ်ခု run ပါသလား သင်ကကြံ့ခိုင်ရေးစတူဒီယိုပိုင်ရှင်လား။ သင့်လျော်သောနေလိုသောသင့်ဖောက်သည်များနှင့်ရေရှည်ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းတို့အတွက်အားကစားရုံများမည်သို့တိုးမြှင့်ရမည်ကိုသင်အာရုံစိုက်ရန်မှာထင်ရှားသည်။
အသင်း ၀ င်သစ်များရရှိရေးအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ရင်းသင်သည်လက်ရှိအသင်း ၀ င်များကိုမဆုံးရှုံးလိုပါ။ နောက်ဆုံးတွင်သူတို့သည်သင်၏ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ရန်သင့်အားယုံကြည်စိတ်ချခဲ့သောသင်၏သစ္စာရှိဖောက်သည်များဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ဖောက်သည်တစ် ဦး အားထိန်းသိမ်းထားသည့်နည်းဗျူဟာကိုထားရှိခြင်းသည်ပညာရှိရာရောက်သည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်သင်ပြaနာရှိတဲ့အခြေအနေမှာရောက်နေမှာသေချာတယ်။
အဓိကရည်မှန်းချက် ဖောက်သည်တစ် ဦး အားထိန်းသိမ်းထားသည့်နည်းဗျူဟာမှာလက်ရှိအဖွဲ့ဝင်များနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအသစ်ကိုမိတ်ဆက်ပေးရန်ဖြစ်သည်။ သို့မှသာ၎င်းတို့သည်ပြန်လာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဖောက်သည်များ၏ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုသည်အရောင်းမြှင့်တင်ရေးနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းများတိုးမြှင့်ရာတွင်အဓိကအခန်းကဏ္ plays မှပါဝင်သည်။
၎င်းမရှိလျှင်မည်သည့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလှုပ်ရှားမှုမဆိုရောင်းအား၊ ၀ င်ငွေနှင့်စားသုံးသူစိတ်ကျေနပ်မှုကိုတိုးပွားစေသည်။ ဒါကြောင့်လက်ရှိအားကစားရုံဖောက်သည်များ၏လက်ရှိထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုဘယ်လိုမြှင့်တင်ပေးမလဲ။ အဲဒီလိုလုပ်ဖို့နည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုက QR codes တွေကိုသုံးပါ.
လှုပ်ရှားမှုအတွက်အားကစားရုံ QR ကုဒ်များ
လန်ဒန်ရှိကြံ့ခိုင်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သော prnewswire.com ၏အဆိုအရအားကစားရုံအများအပြားရှိမတူညီသောကြံ့ခိုင်ရေးစက်များပေါ်တွင် QR ကုဒ်များကိုအသုံးပြုသည်။ ဒီကုဒ်တွေကို 'gymcodes' လို့ခေါ်တယ်။ စကင်ဖတ်စစ်ဆေးသောအခါ၎င်းတို့သည်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှုပြုသည့်နေရာမှမည်သည့်ပစ္စည်းကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုပြသရန်ဗွီဒီယိုတစ်ခုကိုပြသသည်။ ဥပမာ၊ treadmill ကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုသိရန်၎င်းရှိကုဒ်ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးပါ။
ကြံ့ခိုင်ရေးညွှန်ကြားချက်များ၊ ဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများအားဖြင့်အားကစားလေ့ကျင့်မှုသို့မဟုတ်ကျူရှင်ကိုကမ်းလှမ်းရန်အတွက် Code များသည် Weightplan ၏ iPhone အက်ပလီကေးရှင်းနှင့်လည်းအလုပ်လုပ်သည်။ သင်၏အားကစားခန်းမသည်ဤအစီအစဉ်တွင်ပါ ၀ င်ပါကသင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာပစ္စည်းကိရိယာတစ်ခုစီ၌ QR ကုဒ်ငယ်လေးတစ်ခုသာထည့်ရန်လိုအပ်သည်။
သင်၏ဖောက်သည်များသည် Weightplan iPhone အက်ပလီကေးရှင်းဖြင့်ကုဒ်ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးသောအခါဖြစ်နိုင်ချေရှိသောလေ့ကျင့်ခန်းရွေးစရာများနှင့်မည်သို့ဗွီဒီယိုများကိုကြည့်ရှုကြသည်။ အတိုချုပ်ဆိုရလျှင်၎င်းတို့သည် virtual personal trainer ရှိခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးကိုရရှိစေသည်။ အောက်ဖော်ပြပါအချက်များသည်အားကစားခန်းမလေ့ကျင့်သူတစ် ဦး သည်ဤအားကစားရုံများကိုစစ်ဆေးပြီးနောက်ကြည့်ရှုရန်မျှော်လင့်နိုင်သည်။
တိုတောင်းသည် ဗီဒီယိုများသို့မဟုတ် infographics ဤလေ့ကျင့်ခန်းများမည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကို၎င်း၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တစ် ဦး ကရေးသားတိုတောင်းတဲ့စာအုပ်ငယ်ရှိနိုင်ပါသည်။
အားကစားရုံဖောက်သည်များသည် Weightplan ၏တရားဝင်ဆိုဒ်နှင့်တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ရန်သူတို့၏လေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်ကိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်သည်။ သင်နိဂုံးချုပ်သည်အတိုင်း, gymcodes ဖောက်သည်များအတွက်အသုံးဝင်သောအရာတစ်ခုခုပေးခြင်းအားဖြင့်လာမည့်အဆင့်အထိလက်ရှိထိတွေ့မှုအဆင့်ကိုမြှင့်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိအကျကိုဖော်ပြထားသောဗွီဒီယိုများကြောင့်၎င်းတို့သည်အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
အားကစားရုံ ပိုမိုကွဲပြားခြားနားသောလေ့ကျင့်ခန်းအချိန်ဇယားကိုရှာဖွေနေသောသို့မဟုတ်လေ့ကျင့်သင်ကြားမှုအရည်အသွေးကိုစိတ်ချရန်လိုအပ်သောအားကစားရုံသွားသူများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ Weightplan ၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်နှင့်အသုံးပြုသောအခါဤကုတ်များသည်ကြံ့ခိုင်မှုအဆင့်ကိုမြှင့်တင်ရန်အတွက်တစ်နေရာတည်းသောဖြေရှင်းချက်ကိုပေးနိုင်ရန်ကြံ့ခိုင်မှုဆိုင်ရာရှုထောင့်များစွာကိုပေါင်းစပ်ထားသည်။ ဤအားကစားလေ့ကျင့်ခန်းများဖြင့်သင့်အား ၀ န်ထမ်းမရှိသောအားကစားရုံတစ်ခုရှိနိုင်သည်။ Weightplan ၏စီအီးအိုအဆိုအရလူကြိုက်များလာသည်။
ဒါကြောင့်သင်အသုံးပြုရန်လှုံ့ဆော်ခံရကြသည် သင့်အားကစားခန်းမအတွင်းရှိ QR ကုဒ်များ? သို့မဟုတ်သင်၏ကိုယ်ပိုင် QR သင်္ကေတများလိုချင်သလား။ ထိုကိစ္စတွင်ရှေ့ဆက်ဖတ်ပါ။
အားကစားရုံတစ်ခုတွင် QR ကုဒ်များအသုံးပြုရန်အကြံပြုချက်များ
သင့်အားကစားခန်းမအတွင်း QR ကုဒ်များအသုံးပြုရန်ထိရောက်သောနည်းလမ်းအချို့ကိုဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
ရောက်ရှိကြောင်းစာရင်းသွင်းခြင်းဖြေ - ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ချက်ချင်းဝင်ကြည့်ပါ QR ကုဒ်တစ်ခုကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးသည် ဝင်ပေါက်မှာ။
လမ်းညွှန်များ - သင်၏ကိုယ်ပိုင်သင်တန်းပို့ချသူများကပြုလုပ်သောပစ္စည်းကိရိယာများအသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာသင်၏ကိုယ်ပိုင်ဗွီဒီယိုများကိုမျှဝေပါ။ ၎င်းသည်ယုံကြည်မှုကိုတည်ဆောက်ရာတွင်အထောက်အကူပြုသည်။
ညွှန်ကြားချက်များ - ဖောက်သည်များအားပစ္စည်းကိရိယာများကိုမည်သည့်အတွက်အသုံးပြုသည်ကိုအကြောင်းကြားမည့်အစားပစ္စည်းကိရိယာများပေါ်တွင်ကုဒ်နံပါတ်ထည့်ခြင်းဖြင့်အကြောင်းကြားပါ သင်ကြားပို့ချစတစ်ကာများစက်အများစုတွင်စံတစ်ခုရှိခဲ့သည်။
အကြံပေးချက် ဖောက်သည်များအားသင်၏အားကစားရုံအားလူမှုမီဒီယာလိုင်းများမှပေးရန်သို့မဟုတ်အသင်း ၀ င်သက်တမ်းတိုးသောအခါလျှော့စျေးပေးကမ်းရန်တောင်းခံပါ။
ဖြန့်ဖြူးခြင်း: မြို့ပြင်သို့ထွက်သွားကြသူများနှင့် QR ကုဒ်များစာရင်းကိုဖန်တီးပြီးမျှဝေပါ။ သို့မှသာ၎င်းတို့သည်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးပြီးဝေးဝေး၌ပင်ချောချောမွေ့မွေ့ထိရောက်စွာလေ့ကျင့်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သင်သည်ဤကုဒ်များကိုအခမဲ့ပေးသို့မဟုတ်သင်ဆန္ဒရှိလျှင်ပင်အားသွင်းနိုင်သည်။ မည်သည့်နည်းဖြင့်မဆိုသင့်ဖောက်သည်များအားကမ်းလှမ်းရန်မှာမှတ်သားဖွယ်ကောင်းသောဝန်ဆောင်မှုဖြစ်သည်။ စိတ်ဝင်စားစရာမှာသူတို့သည်လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်အဆက်အသွယ်ရှိနေပြီးဤဂရုစိုက်စောင့်ရှောက်မှုအတွက်သင်၏အားကစားရုံမှထွက်သွားမည်မဟုတ်
လက်ကမ်းကြော်ငြာများပေါ်တွင် QR ကုဒ်များထည့်ပါအခမဲ့အသင်း ၀ င်မှုသဘောတူညီချက်ကိုမြှင့်တင်ရန်အတွက်ဒေသတွင်းသူတို့ကိုပေးပို့ပါ။ ကုဒ်နံပါတ်ကိုမိုဘိုင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောစာမျက်နှာသို့ချက်ချင်းစာရင်းပေးသွင်းပါ။
အားကစားရုံ QR ကုဒ်များကိုအသုံးပြုခြင်းသည်သင်၏ဖောက်သည်များအားသင်၏ဂရုစိုက်မှုနှင့်စိုးရိမ်မှုကိုပြသထားသောကွဲပြားခြားနားသောသတင်းအချက်အလက်သို့မဟုတ်မြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာပစ္စည်းများနှင့်ချိတ်ဆက်ထားပါကထိရောက်မှုရှိသည်မှာသေချာသည်။ ဤသည်နောက်ဆုံးတွင်ဖောက်သည်များ၏ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုတိုးမြှင့်ပေးသောစိတ်ခံစားမှုနှောင်ကြိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
အပေါ် Qr ကုဒ်များ ကူပွန်များ & လက်ဆောင်များ
ဘယ်လို QR Code ကိုရှာပါ